Manje sizokubonisa indlela ukuvula ifayela Dmg. Le fomethi osebenza ku izithombe disk, kodwa ukuze uyibuke, udinga isofthiwe ekhethekile. Kulesi sihloko sizozama ukuhlaziya ngokuningiliziwe le nkinga futhi izinhlelo abakhona ukuthi kuzosiza ukuxazulula le nkinga.
Yisiphi isimiso ukuvula ifayela Dmg? Dmg - kuyini?
Le fomethi kuyinto isithombe disk ezidalwe imvelo ye-Mac OS. izinto ezinjalo zimumethe eluhlaza idatha amabhlogo, okuyinto ngezinye izikhathi ngokuvamile kufakwa ikhodi eyisivikelo futhi onomfutho. Ngokuvamile, lokhu format isetshenziselwa isifaki etholwe kusuka ku-intanethi. Dmg format ubuyisela IMG, okwakubekelwa ngaphambili ababevame Mac.
Izithombe yalolu hlobo kungenziwa agibele amahhashi usebenzisa «Apple Disk» Uhlelo, elitholakala njengengxenye «Mac OS». Le fomethi yenzelwe ukusetshenziswa ne-Mac OS. I «Amathuluzi daemon» Uhlelo ukusebenza «Windows» futhi kungenziwa agibele amahhashi eceleni Dmg izithombe. Ezinye izinhlelo zokusebenza zingase ukuguqula izithombe evamile ngoba «Windows» uhlelo nezakhiwo.
Easy daemon Amathuluzi
Ukuze uthole ukwaziswa sendlela ukuvula uhlobo lwefayela Dmg, sitshela Uhlelo daemon Amathuluzi version «Lite». On kubalulekile ukukhuluma kabanzi ngemininingwane. Isicelo bangasebenza izinto bavikelekile ukukopisha. Kuyinto uhlelo jikelele ukulingisa oshayelayo.
Ngemuva kokuqala isicelo lincishisiwe ngokuzenzakalelayo ku ugqoko ngqo therefrom ongenza ejwayelekileyo ngaphandle egijima kuwindo. Le software ikuvumela ukuba adale amadiski ezine virtual. Uhlelo lokusebenza Uphendula amafayela unekhono ngokuphephile livikelwe ngephasiwedi izithombe, futhi ngaphezu kwalokho, ukumisa ngemoto (DVD-ushintsho esifundeni kanye incwadi).
Uma uyazibuza kanjani ukuvula ifayela Dmg, Bazama ukukwenza uhlelo "7--Zip». Sikhuluma nezwe odumile archiver khulula, okuyinto esekelwe khulula ikhodi yomthombo. Phakathi kwezinye izinto, uma ukuphathwa zohlelo nge umugqa wemiyalo. Kulokhu, umphathi has a umsebenzi ukuhlola amafayela.
Ngakho, umsebenzisi ungabona inombolo amafayela archive, futhi usayizi wefayela (original futhi isimo onomfutho). Iphinde ubonisa inani amaphutha, uma ifayela ethile yonakele. Ngokukhethekile, uhlelo, ukupakisha noma ukukhipha izinto, vele uchofoze inkinobho yegundane kwesokudla on ifayela oyifunayo, bese usho ukuthi isenzo oyifunayo.
Impendulo yakhe yombuzo kanjani ukuvula ifayela Dmg iyatholakala futhi AnyToISO hlelo. Leli thuluzi uyakwazi ukuguqula izinhlobo ezahlukene izithombe evamile ISO format. Ungakha futhi izithombe kusuka DVD, i-CD noma Blu-ray akwazi ukugcina. Ungasebenza ngedatha RAW. Izithombe kungabuye iyakhiwa kusetshenziswa noma iliphi ifayela noma ifolda nezinto.
Ready ISO, etholwe ngosizo lolu hlelo, kuyahambisana ngokugcwele wokusebenza ezahlukene, kanye nanoma yikuphi uhlelo unekhono ashise CD. Uhlelo lutholakala ngokushesha kuzilimi 28. Uhlelo lokusebenza luhlanganisa ne-Windows Explorer «Windows», ngesikhathi esifanayo isekela line umyalo. Kukhona version free.
Indlela ukuvula ifayela Dmg ezinye izinhlelo zokusebenza
Njengoba umsebenzi angakwazi ukusingatha kanye «PeaZip» Isicelo ukuthi simele archiver ifayela. Interface kungashintshwa ngumsebenzisi. Izikhumba, ungakwazi ngezifiso bese ugcine umbhalo for intuthuko eyengeziwe. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa obala etholakalayo. Uhlelo usebenze ephathekayo.
Njengoba version of «Windows», ikhishwe njengoba iphasela single futhi okuzenzakalelayo ngokugcwele, okuyinto ikuvumela ukuhlanganisa PeaZip e Explorer. PeaZip has a GUI. Kulokhu, ithuluzi bangasebenza umugqa wemiyalo nezici GUI.
Uhlelo yokugcina, siyaphi ukutshela e lomlayezo futhi lapho amandla ukuxazulula le nkinga, okuthiwa TransMac. Lolu hlelo lokusebenza inikeza ukufinyelela idatha ilotshwe Apple Macintosh format. Uhlelo likuvumela ukufunda lezi idatha, ukopishe bese uthumele kwikhompyutha siqu ezivamile.
Ngaphezu kwalokho, izinto ebhalekayo, kanye nokufomethwa ngemoto e-Macintosh HFS uhlelo. Isicelo usebenta cishe zonke izinhlobo abezindaba, kuhlanganise nama-hard drive, amadiski floppy, i-DVD ne-CD. Uma iqalise uhlelo lokusebenza lwe-Windows 7 noma Vista imvelo, khumbula ukuthi kuleli cala, lo hlelo ludinga ezingeni eliphakeme amalungelo. Isicelo kufanele agijime umqondisi.
Ngenxa yale njongo kubalulekile uchofoze izinqamuleli nge inkinobho yegundane kwesokudla bese ukhetha kwimenyu wavula lento ezifanele. Ungaphinde ukhethe imenyu nto "Properties", bese uye kuthebhu "Ukuhambelana" ahlanganisa Isici esifanayo. Uhlelo uyakwazi ukufunda nokubhala Mac-format cishe kunoma iyiphi uhlobo abezindaba. Isekela iningi akwazi ukugcina, kuhlanganise: SCSI, FireWire, ATAPI, IDE USB.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukuvula ifayela format Dmg. Sethemba, lezi amathiphu kuyoba usizo.
Kanjani ukuze ufunde ukuthi usebenze nge-Excel ngokwakho: incazelo yohlelo, izincomo kanye nokubuyekeza
Amaphutha iphahlazeke service.exe - kuyini?
Tshela wena, uvula FB2
Gastroenteritis ingane: izimbangela, izimpawu kanye zokwelapha
Ingabe umdlavuza ubuchopho iphathwa? Umzabalazo ukuphila!
Ukubhaka: iresiphi yama-curds nekhekhe